साप्ताहिक संवाददाता , माघ ६, २०७५
डा. केसीको पारा देख्दा त उनी बाँचुन्जेल उनको अनशन अन्तिम हुँदैन् । बिचरालाई केही राजनीति खेलाडीले पुराना झुम्राको बल जस्तै बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता सम्मानित व्यक्ति राजनीतिको गोटि बनेर खतम हुने भए । पुरा पढ्नुहोस्
कुनै एक जना खेलाडीले पूरा लिगको उपाधि होडमा कति फरक पार्न सक्छन्, त्यो अनन्त तामाङले प्रमाणित गरेका छन् । यसमा उनलाई गर्व भने हुनेछैन, न त अनन्तले ठूलो स्वरमा यस विषयमा कुरा गर्न सक्नेछन् । पुरा पढ्नुहोस्
इन्काउन्टरमा मारिए भैरहवाका डन
माधव ढुंगाना, माघ ६, २०७५
प्रहरीको तथ्याड्डमा सहनी २०६५ सालदेखि नै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । सहनीले जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा आजाद समुहमा समेत आवद्ध रही अपराधिक आतड्ड मच्चाएका थिए । प्रहरीका अनुसार, २०६५ साल असार २३ गते उनी कपिलबस्तु जिल्लामा स्वचालित पेस्तोलसहित पक्राउ परेपछि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कपिलवस्तु कारागारमा थुनामा परेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
कसले लगाउने होला ?
एक फेसन डिजाइनरले सन् २०१९ लाई लक्षित गरेर तयार पारेको जिन्सको पाइन्टले अहिले धेरैलाई चकित तुल्याइरहेको छ । युक्रेनको राजधानी किभमा आफ्नो करिअर बनाइरहेकी डिजाईनर सेनिया स्नाइडरले तयार पारेको जिन्सको यो पाइन्ट कसले लगाउने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
कमाउने मान्छे नै बितेपछि तामाङ परिवारमा बज्रपात हुनु स्वभाविक थियो । दिनहरू बित्दै थिए, तीन महिनापछि सन्तोषीलाई साउदी अरेबियाबाट फेरि फोन आयो । फोनमा ‘सुवास दाइ त जिउँदै हुनुहुँदो रहेछ । अस्पतालमा उपचार हुँदैछ’, भन्ने खबर दिइयो । ‘खबर सुनेर अनुहारमा केही बेरका लागि हाँसो त आयो तर दाहसंस्कार गरेको शव कसको थियो भन्ने चिन्ताले थप पिरोल्न थाल्यो । पछि बुझ्दै जाँदा शव उनीसँगै दुर्घटनामा परेका कपिलवस्तुका टेकेन्द्र भण्डारीको रहेछ ।’ पुरा पढ्नुहोस्
के अघोरीहरू साँच्चै डरलाग्दा हुन्छन् ?
स्वामीनाथन नटराजन, बीबीसी वल्र्ड सर्भिस माघ ६, २०७५
लन्डन स्कुल अफ अफ्रिकन एन्ड ओरिएन्टल स्टडीजका संस्कृत प्राध्यापक जेम्स म्यालिन्सन भन्छन्– ‘अघोरी दर्शनको सिद्धान्तअनुसार आध्यात्मिक ज्ञान हासिल गर्नु छ र ईश्वरलाई भेट्नु छ भने शुद्धताको नियमभन्दा टाढा जानुपर्छ । अक्सफोर्डमा अध्यापन गर्ने म्यालिन्सन स्वयं एक महन्त र गुरु हुन् । यद्यपि उनको समुदायमा अघोरी सम्प्रदायका प्रक्रियाहरू बर्जित छन् । पुरा पढ्नुहोस्
सेकुवा नेपालमा सर्वाधिक रुचाइने परिकारमध्ये एक हो । त्यसैले त अहिले राजधानीका अधिकांश सेकुवा कर्नरहरू सफलताको कथा भनिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
गोपीकृष्ण मुभिज तथा आरोही इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गरेको चलचित्र ‘रोज’ प्रदर्शन भैसकेको छ, तर अभिनेता प्रदीप खड्कादेखि संगीतकार एसिल कार्कीसम्मले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । अभिनेता खड्काले सम्झौता गरिएअनुसारको पूरै पारिश्रमिक पाएका छैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
सोसल मिडियामा अभिनेत्री दिशा पाटनीको एउटा हट तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै हलचल मच्चिएको छ । केही दिन पहिले उनले आफ्नो अफिसियल इन्स्टाग्राम एकाउन्टबाट एउटा वोल्ड तस्बिर सेयर गरेकी थिइन् । पुरा पढ्नुहोस्
महेश तिमल्सिना , माघ ६, २०७५
सालको पातको टपरी हुनी गीत अहिले मानिसहरूको ओठमा छ । यो गीत सुन्नेबित्तिकै बालक, वयस्कदेखि वृद्ध–वृद्धासम्मका कान ठाडा हुन्छन्, जिब्रो सलबलाउन थाल्छ । यो गीतले लोकदोहोरी इतिहासमा सबैभन्दा बढी २ करोड २५ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएर कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
दुर्गा र शिव वर्षकै सर्वोत्कृष्ट गायक/गायिका
रेडियो कान्तिपुरको २० औं वार्षिकोत्सव अवसर पारेर शनिबार राजधानीमा आयोजित नेसनल म्युजिक अवार्डमा शिव परियार र दुर्गा परियारले सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गायन विधाको अवार्ड उचाल्न सफल भएका छन् । शिव परियारले ले ‘आँसुको अर्थ...’ बोलको गीतबाट गायन विधाको अवार्ड जित्दा दुर्गाले ‘वन फूल...’ बाट जितेकी अवार्ड उचाल्न सफल भईन् । पुरा पढ्नुहोस्